के यो साँच्चै संलग्नता हो? | Martech Zone
के यो साँच्चै संलग्नता हो?
बिहीबार, अक्टुबर 3, 2019 बिहीबार, अक्टुबर 3, 2019 Douglas Karr
यदि म मेरो प्रेमिकासँग गत महिना भन्दा% 83% बढी कुरा गर्छु भने, म म हुँ बढी संलग्न? म कसरी उनको बारेमा केही टिप्पणी गरे भने के गर्ने? म संलग्न छु?
सगाई को परिभाषा स्पष्ट छन्:
(१) विवाह गर्न औपचारिक सम्झौता।
(२) केहि गर्न वा निश्चित समयमा कतै जाने योजना।
Merriam वेबसाइट स Eng्लग्नको परिभाषा
एक भन्दा बढी दशक पहिले, मैले पहिलो पटक यो रेन्ट प्रकाशित गरेँ कि मेरो चाहना थियो कि बजारहरूले शब्द अभिव्यक्त गर्न छोड्नेछन् मंगनी एक व्यापार मेट्रिक को रूप मा। आज यो हाम्रो उद्योगमा अझै पनी एउटा मुद्दा हो त्यसैले मैले यसलाई तलको भिडियोको साथ पालन गरें।
पृष्ठमा मापन गरिएको समय, टिप्पणीहरूको संख्या, अनुयायीहरूको संख्या, मतको संख्या, वा हेरिएको भिडियोको मिनेटहरूको संख्याले तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गरिरहेको छैन जब सम्म तपाईं प al्क्तिबद्ध गर्न सक्नुहुन्न मंगनी एक वास्तविक गर्न व्यवसाय परिणाम। यदि तपाईं सक्नुहुन्न, यो केवल एक हो भ्यानिटी मेट्रिक.
पदको दुरुपयोगको बारेमा म अझै गुनासो गर्दै छु मंगनी आज किनभने मँ धेरै ग्राहकहरु लाई कन्ट्याक्टमा ठूलो रकम खर्च गरीरहेको छु जुन कुनै व्यवसाय लाभ प्रदान गर्दैन।
होइन मंगनी, यो हो डेटिंग। र यसको मतलब यो होइन कि बजारहरूले दर्शकहरू, अनुयायीहरू, फ्यानहरू, श्रोताहरू, आदि ... बीचको अन्तरक्रियाको केही प्रकारको अनुसरण गर्नु हुँदैन। तिनीहरूले गर्नु पर्छ। तर बजारहरू अन्ततः वास्तविक व्यवसाय परिणामहरूको साथ अन्तर्क्रियामा प al्क्तिबद्ध हुनुपर्छ।
डेटि any कुनै सामाजिक गतिविधि हो जुन सामान्य रूपमा दुई व्यक्तिको लक्ष्य लिई प्रत्येकको साझेदारको रूपमा अर्कोको उपयुक्तताको मूल्या .्कन गर्दछ।
यदि तपाइँको आगन्तुकहरु तपाइँको साइट मा अधिक समय खर्च गर्दै छन्, बधाई छ! तपाईं अधिक डेटि and गर्दै हुनुहुन्छ र यो राम्रो संकेत हो ... तर यो संलग्नता होईन। जब तपाइँको आगन्तुकले औठी खरीद गर्दछ र तपाइँको औंलामा राख्दछ, मलाई बताउनुहोस् कि तपाइँ व्यस्त हुनुहुन्छ। जब ती आगन्तुकहरूको संख्या बढ्छ र तिनीहरूले तपाईंको वेबसाइटको अधिक खरीद गर्छन्, तब तपाईं मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको संलग्नता बढिरहेको छ।
बजारहरू जो सक्दैनन् सामाजिक मिडियाको साथ लगानीमा वापसी नाप्नुहोस् उनीहरूको प्रयासलाई वैधानिक बनाउनको लागि स like्लग्नता जस्ता सर्तहरू प्रयोग गर्नुहोस् र उनीहरूका ग्राहकहरू ... तिनीहरूको पैसा बर्बाद गर्दा।
जब जेफ्री ग्लुइकले एक दशक अगाडि इमार्केटिंग एसोसिएशन सम्मेलनमा उद्घाटन भाषण गरे, उनले एउटा उत्कृष्ट कथा भने यात्रा यसको प्रयोग गरेर सोशल मिडिया अभियान सुरू गर्दै जीनोम र माइस्पेस.
सगाई मापदण्डहरू द्वारा, अभियान एक विशाल सफलता थियो ... सबैले जिनोमसँग मित्रता बनाए र टिप्पणीहरू र कुराकानीहरू उडिए! व्यक्तिहरूले पृष्ठमा अधिक समय खर्च गरे र त्यहाँ एक टन जोखिम रहेको थियो। दुर्भाग्यवस, यद्यपि, अभियानको लागत k 300k र ट्र्याभोसिटीमा ड्राइभि .्ग व्यवसायमा विफलता नै थियो। अर्को शब्दमा ... कुनै स engage्लग्नता छैन।
PS: एक साइड नोट मा ... म सँग एक प्रेमिका छ तर हामी संलग्न छैनौं।
पीपीएस: धन्यवाद Ablog सिनेमा यो शानदार भिडियो उत्पादनको लागि! यो हाम्रो मा दोस्रो छ मिथ्या, गलत धारणा, र भाडा श्रृंखला।
सिडेकर: डाटा चालित अमेजन विज्ञापन रणनीतिहरू
कसरी थ्रीडी भिजुअलाइजेसन + सीपीक्यू ड्राइभिंग बिक्रीहरू
अप्रिल 25, 2009 मा 8: 52 एएम
गुड प्रभु… यो पोस्टको शीर्षक पढेर म अफिसको कुर्सीबाट खसेको थिएँ। लामो अवधिमा ट्राफिकले फरक पार्दैन.. बिक्री भनेको के गणना हो। राजस्व। राजस्व। राजस्व।
अप्रिल 25, 2009 मा 12: 51 PM
स्टीफनलाई बोर्डमा ल्याएकोमा बधाई छ। उहाँ एक महान केटा हुनुहुन्छ र म खुसी छु कि उहाँ तपाई साथीहरूसँग सामेल हुनुभएको छ... मलाई लाग्छ कि उहाँ कसरी खन्नुहुन्छ र चीजहरू बाहिर निकाल्नुहुन्छ भनेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ।
पुन: यो। मलाई लाग्छ कि तपाइँका ग्राहकहरु र ग्राहकहरु संग सम्बन्ध निर्माण अविश्वसनीय महत्त्वपूर्ण छ - र केहि चीजहरू मापन गर्न धेरै गाह्रो छ। मलाई ब्लगिङ र सोशल मिडिया मन पराउनुको एउटा कारण यो हो कि म पारदर्शी हुन सक्छु, म इमानदार हुन सक्छु, म मेरा ग्राहकहरूलाई धेरै ध्यान दिन सक्छु - तर सबैभन्दा धेरै - मलाई थाहा छ ती सबै चीजहरू जुन कठिन थिए। पहिले मापन गर्न अहिले मापनयोग्य छन्।
म केवल मार्केटरहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि तिनीहरूका क्लाइन्टहरूलाई दृश्य फनेल प्रदान गर्नुहोस् जसले उनीहरूलाई b,bबाट c, र c बाटdमा जान्छ भन्ने प्रमाण प्रदान गर्दछ। जब ग्राहकहरूले खुला, इमान्दार र उपलब्ध भएको थाहा पाउँछन्... तिनीहरू यसको लागि अझ राम्रो हुनेछन्! हामीले उनीहरूका लागि यो प्रमाणित गर्नुपर्छ।
तपाईलाई यहाँ देख्न पाउँदा खुसी लाग्यो! तपाईं बीन कपमा कहिले आउँदै हुनुहुन्छ?
अप्रिल 25, 2009 मा 11: 44 एएम
सायद हामी यहाँ एक अर्थपूर्ण तर्कमा जाँदैछौं, तर मलाई लाग्छ कि यो हुनु लायक छ।
A. यस्तो देखिन्छ कि संलग्नता तपाइँको समानतामा एकल घटना हो (वा कम्तिमा एक घटना खरीद द्वारा मात्र ट्रिगर गरिएको हो)। म तर्क गर्छु कि संलग्नताको अर्को परिभाषा भनेको कुराकानी वा सम्बन्धमा एक व्यक्तिलाई "मा तान्नु वा संलग्न गर्नु" हो। संलग्नता एकल वा एक क्लाइमेटिक घटना पनि होइन। यो सानो सम्बन्ध हो जुन कम्पनी र ग्राहक बीचको समृद्ध सम्बन्धमा परिणत हुन्छ। यसले उनीहरुबीचको दुरी घट्दै गएको छ ।
B. तपाईंले सूचीबद्ध गर्नुभएको "सलग्नता" को ती अभिव्यक्तिहरू मध्ये प्रत्येकलाई मापन गर्न सकिन्छ र म पनि तिनीहरूलाई संलग्नताको रूपमा परिभाषित गर्छु। जहाँ म तपाइँको संदिग्धता साझा गर्दछु जब यी प्रत्येक अभिव्यक्तिलाई आफ्नै खातिर परिमाण गरिन्छ। कसैले टिप्पणी छोडेको कारणले गर्दा तिनीहरू खरिद गर्ने जस्ता व्यवसाय-परिभाषित कार्यहरू गर्न नजिक छन् भन्ने होइन। संलग्नता कार्यहरूले व्यापारले चाहेको केही अन्तिम नतिजातर्फ निर्माण गर्नुपर्छ। मार्केटिङले यो (प्रायः गैर-रैखिक) मार्ग पूरा गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, जहाँ Travelocity असफल भयो भने प्रत्येक ग्राहक संलग्नताले व्यक्तिलाई अन्तिम-लक्ष्य पूरा गर्न कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने सोच नगरी केही राम्रो जागरूकता अभियान सिर्जना गरिरहेको थियो।
C. यदि हामी तपाइँको समानता संग काम गर्न चाहन्छौं भने ... मलाई लाग्दैन कि कम्पनीहरूले वास्तवमै आफ्ना ग्राहकहरूबाट औंठी पाउँछन्। कम्पनीहरूले निरन्तर ग्राहकलाई आकर्षित गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई संलग्न गर्नुपर्दछ, उनीहरूसँग नयाँ सम्बन्धहरू निर्माण गर्नुपर्दछ। यदि एक कम्पनीले सोच्दछ कि उनीहरूले अन्ततः आफ्ना ग्राहकहरूलाई विवाहको गलियारेमा ल्याएका छन्, तिनीहरू साँच्चै आश्चर्यचकित हुनेछन् कि उनीहरूको तस्वीरमा तलाक कति छिटो छ।
लामो समयको टिप्पणीको लागि माफ गर्नुहोस्, तर मलाई विश्वास छ कि संलग्नता मार्केटिङको लागि एक महत्त्वपूर्ण मेट्रिक हो र यो अझ प्रभावकारी रूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ। मात्र फरक दृष्टिकोण।
अप्रिल 25, 2009 मा 12: 37 PM
राम्रो प्रतिक्रिया र राम्रो कुराकानी। तपाईंको प्रतिक्रिया भित्र, म यी कुनै पनि घटनाहरूले वास्तवमा मौद्रिक सम्बन्धमा 'नेतृत्व' गर्छ भन्ने धारणालाई चुनौती दिनेछु। मलाई एकल कम्पनीको बिक्री फनेल देखाउनुहोस् जसले प्रमाण प्रदान गर्दछ कि मानिसहरूलाई तपाइँको व्यवसायबाट किन्नको लागि प्राथमिक माध्यम तपाइँको ब्लगमा टिप्पणी गर्नबाट सुरु हुन्छ... वा तपाइँसँग भएको अनुयायीहरूको संख्या र तपाइँको समग्र मार्केटिङ बजेट बीचको सम्बन्ध छ।
मलाई लाग्छ कि मेरो निराशा यस तथ्यमा छ कि मानिसहरूले विश्वास गर्छन् कि यो व्यवसायहरूको लागि कुनै प्रकारको छद्म प्रदर्शन सूचक बनिरहेको छ। मार्केटरको रूपमा, मैले यी चीजहरू र वास्तविक खरिदहरू बीचको कारण र प्रभाव सम्बन्ध देखाउने प्रमाण र विश्लेषणात्मक डेटा प्रदान गर्न आवश्यक छ। आज सम्म, मलाई लाग्छ कि यो bs हो
धेरै सम्मान सहित!
माइकल रे हप्किन
अप्रिल 25, 2009 मा 7: 45 PM
डग, यो एक महान समानता हो, र म सहमत छु 'सगाई' अति प्रयोग र थकित छ। अन्ततः मार्केटरहरूले व्यवसायलाई ड्राइभ गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ र मानिसहरूलाई तपाईंको उत्पादन र सेवाहरूको लागि आफ्नो पैसा छोड्ने बारे गम्भीरतापूर्वक ल्याउँछ। - माइकल